Umhla My Pet » Indlela uKiss kwi 5 Amanyathelo Easy
Ukwanga sisenzo ulwalamano kwaye xa isenziwa kakuhle kunye nomntu ekunene, oko kunokukhokelela esifubeni-maza, emhlathini-uvuza umlingo. Nangona le meko ngabaya, ayiyo. Ngokulandela eli step-by-step isikhokelo lula, kungekudala uza kuba endleleni yakho ekuboneni zitaka.
inyathelo 1: Ukuqalisa Kiss
Akazukulinda yonke. Ngokuyeka ngothsuphe ezingaqondakaliyo, uno- wamanga ngaphandle iphuma kwaye sisithi kuyo. Unxibelelwano ngokumanga ziquka: ukubhaqwa ngokufutshane ngokujonga imilebe ngomhla wakho, Ekwahlukaneni kancinane imilebe yakho, encumileyo iindevu athile ukuleqa njengoko bejonge amehlo umhla wakho, okanye ukwenza umlomo wakho kissable kunye iglosi / intonga chap kunye minty impefumlo epholileyo. Kanjalo, xa sekuqinisekisiwe neqabane lakho okwethutyana, neminye imiqondiso iimvakalelo kuya kukunceda ukuba wazi xa ixesha elifanelekileyo ukuba amange kubo.
inyathelo 2: Icwangcisa Mood
Ukwayama kwi kuba ngokumanga na nokuba sexier xa nokumncoma inikwa. intetho “uyinzwakazi kangaka / eyinzwana” ngendlela olusondeleyo kunokusinceda amp ukuya angathabatheki. Ngokwehlisa umthamo kunye nethoni yelizwi lakho njengoko Ungavala amehlo isixelela umhla wakho ukuba iimvakalelo ezinzulu kubo ngeli ezilingayo ukuba bafudukele kufutshane kuwe.
inyathelo 3: NgoMhla Kissing Umda
le ingaba yi kiss wakho kuqala, kiss wokuqala neqabane olutsha, okanye wena nervous kancinane malunga ukuzanga, uwaphule umqobo ukuzanga akuyi kuphela ukunceda bazole ezo luvo kodwa iza kubonisa iminqweno yakho uthando. Endaweni eya kuba kiss enkulu, Ungayami kwi ngenxa ukuncomana undange esidleleni umhla wakho. Undoqo eli nyathelo ukufakwa. Yenza iimvakalelo zakho neenjongo ezicacileyo ngokubeka kiss kufutshane nendlebe okanye umlomo xa babezilazila imizuzwana embalwa. Bayasebezelana into flirty endlebeni zabo ngelixa imilebe yakho esijikeleza Enye indlela ekuncedeni umqobo ukuzanga.
inyathelo 4: Ziya kuba Kiss
Gcina elula kiss. inkanuko kakhulu kwi kiss yokuqala inokuba turn-off. Ndiyawabalisa ngemilebe yomlomo wakho zalaba ngokuthambileyo, nokuba ndityale ngokumanga ngqo okanye ngobunono ukutshixa imilebe umhla wakho. Kweli nyathelo, kubalulekile ukulandela imihla yakho kukhokelela. Nikelani ingqalelo kwindlela umhla wakho mayiphendule enambuzelayo ngexesha kiss. Ukuba bayame okanye erne, ukuze nibe nako ukufudukela encamisana ngaphezulu. Ukuba akukho njalo, Ukuphelisa kiss ngokuyihlutha umva, ukuvula amehlo akho ukuze ukwazi ukujongana, yaye bencumile.
inyathelo 5: Post-Kiss Bliss
Oku bangen nqanaba lenkqubo ukuzanga kakhulu le. Ukuba uyinandiphile kiss ukubonisa iqabane lakho ngokuthi kubanjwe ngesandla yaye bencumile. Ukuba uza gqolo ukwanga, qiniseka ukuba ukugcina zoqhagamshelwano wakho emzimbeni. Ungatshintshelo up isimbo yakho ukwanga ngokusebenzisa engile indlela, isantya kunye nobude kiss, kiss ukuqina nobushushu, emilebeni endaweni. Ukuba wenziwe ukuzanga okwethutyana, manga emehlweni zabanye kwaye wonwabele mzuzu.
Nangona oku ngethemba sokuqala ukwanga ezininzi kuwe nomhla lwakho, kubalulekile ukuba bonwatyi- iimvakalelo lo mzuzu. Makhe ocwengileyo Menye emehlweni akho, Hlala uncumile, kwaye ninikele kuNdikhoyo “wena phezu kwehlabathi” uvelwano.